Enweela m Linux ... ugbu a kedụ ka m si egwu? | Site na Linux
Hyuuga_Neji | | GNU / Linux, Egwuregwu, Na-atụ aro
Ndị na-egwu egwu dị ka m na-anabata ịdaba na gburugburu GNU / Linux, n'oge ụfọdụ anyị jụrụ onwe anyị ajụjụ a ma eleghị anya ugbu a ka oge na-aga (na ka anyị na-enweta ahụmịhe), anyị nwere ike ịkwụsị ịjụ onwe anyị otu esi egwu, nke ọma ... Nke a bụ maka ndị bịara ọhụrụ na-egwu egwu, ọkachasị mgbe akụkọ gbasara Steam na mbata ya na Linux; ebe ọ bụ na ọ dị mma mgbe niile ịnwe ikpo okwu iji kpọọ, mana ọ dị nwute na e nwere ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ na-anọghị n'elu ikpo okwu, ụfọdụ n'ime anyị ga-achọ igwu ha n'oge ụfọdụ… ebe a anyị na-aga!
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla maara onye ọrụ GNU / Linux nụrụ na «na Linux ma ọ bụrụ na ị nwere ike igwu»Na ọ fọrọ nke nta mgbe ekele Mmanya, ma eleghị anya, ha amaghị na Wine bụ naanị otu n’ime ọtụtụ mmemme dị adị na-enye anyị ohere iulateomi egwuregwu Windows anyị, ebe ha bụkwa Egwuregwu CrossOver y Cedega.
Na mbido ihe dị iche n'etiti ha abụghị ọtụtụ (Ewezuga ụfọdụ mgbanwe ndị ọzọ mgbe a bịara n'ihe ntanetị ma ọ bụ eserese) Ma ka oge na-aga, ọrụ ọ bụla esiwo ụzọ nke ya, na-eme ka ọdịiche a buru ibu. Ebumnuche nke post a abụghị "ịmalite ịlụ ọgụ na ibe gị" kama ọ bụ iji nye nkọwa (n'ime ọhụụ nke onwe m) nke ọ bụla n'ime ha.
Mmanya Ọ bụ kpam kpam n'efu ma eleghị anya ọ bụ ya mere ọ bụ otu n'ime 3 kachasị eji egwu egwu anyị, ọtụtụ n'ime distros taa na-enye ohere nke ịwụnye ya ndị ọrụ ha.
Cedega Ọ bụ ụlọ ọrụ akpọrọ TransGaming mepụtara ya ma ọ dị ma ọ bụrụ na ị kwụọ ihe ruru $ 25 USD iji nweta ndenye aha ihe dịka ọnwa 6.
CrossOver Maka akụkụ ya, CodeWeavers mepụtara ya, naanị ị chọrọ ịkwụ ụgwọ $ 39.95 USD mana ịkwụ ụgwọ ahụ anyị nwere ike ịnwe obere mmemme.
Mmanya y CrossOver Ha abughi na gburugburu GNU / Linux, kamakwa ha nwere nsụgharị ha maka Mac-OSX (n'ihi na ndị nke manzanita na-enwekwa mmasị igwu egwu site n'oge ruo n'oge), Mgbe TransGaming na-ere ihe akpọrọ Cider ma ọ bụ ihe yiri ya, nke bụbu ihe dịka otu nkịta nwere akwa olu dị iche mana nke na-emezu ebumnobi ya n'otu ụzọ ahụ.
CodeWeavers, ụlọ ọrụ n'azụ CrossOver o nwere nsụgharị ndị ọzọ elu ya uwe, dị ka Crossover-Office. Ọ bụ ezie na Crossover-Office nwere ike i emomi ụfọdụ egwuregwu, Egwuregwu CrossOver bụ ngwa ha kwadoro igwu egwu, dịka e mere ya kpọmkwem maka nke a ma nwee gburugburu ebe obibi na-achịkwa kpamkpam site na eserese eserese (GUI), ebe ndị ọrụ nwere ike ịme ka ha « karama »iji jigide nhazi Wine dị iche iche n'ime ha, nke pụtara na ọ ga-abụkwa ihe dịka ndọtị nke ikike ebe ọ na-enye anyị ohere ịchekwa ọtụtụ nhazi iji kpọọ ọtụtụ egwuregwu.
CrossOver O nwere ntinye ihe osise ma gosiputa ọba akwukwo ndi gunyere Directn na ndi a gọziri agọzi DirectX na. Mgbakwunye ndị ọzọ dị mfe ịwụnye, nke na-eme ka egwuregwu ahụ wụnye ntakịrị ọsọ karịa Wine. Maka nhazi ọ na-eji otu ịba uru nke Wine na-eweta. CrossOver nwere Database nke karama ya niile, nchekwa data a ezughi oke; nke m chere ga-aka mma iji nwee ike iji Wine's DB wee kwuo egwuregwu ga-eso CrossOver agba.
Mmanya ọ bụ a ndakọrịta oyi akwa na-enye ohere GNU / Linux gburugburu na-agba ọsọ Windows ngwa. N'adịghị ka emulator nkịtị (nke ga-enweta ngwaike na ngwanrọ ngwanrọ), Wine nwere ike ịnweta ọba akwụkwọ Windows ma mee ka ha rụọ ọrụ n'ime Linux. Nke a na-eme ka Wine ukwuu ngwa ngwa karịa ndị ọzọ emulators na mebere igwe. E nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke egwuregwu na-akwado Wine, n'ezie na ngo ngo website ọ na-akwado ọdụ data gbara ọkpụrụkpụ nke egwuregwu akwadoro yana akwadoghị ya, yana ụfọdụ ndụmọdụ esi aga ụfọdụ n'ime ndị a ka ha rụọ ọrụ ọfụma.
Mmanya nwekwara a graphic nhazi ngwá ọrụ a na-akpọ «mmanya mmanya»Ma ọ gụnyere ngwaọrụ a kapịrị ọnụ maka nhazi ọkwọ ụgbọ ala, multimedia, wdg. Site na ndabara ngwa a anaghị eweta Frontend ọ bụla maka igbu egwuregwu ahụ, mana ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ngwa na-arụ ọrụ maka nke ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ na anyị nwere ike isi na njikwa ahụ. Egwuregwu ndị na-eji OpenGL na-akwado n'ime Wine, ọbụlagodi ụfọdụ na-eji ọba akwụkwọ DirectX enwere ike ịchọta na netwọkụ nke netwọkụ. The. Net nyiwe stof adịghị mfe iji wụnye na Wine, ma egwuregwu na-achọ ihe ndị a yiri ka ha na-agba ọsọ nke ọma. I nwekwara ike tinye obere ihe ndị ọzọ dịka MS Corefont font (ekele maka edemede akpọrọ Onyeka nke ahụ na-agbasa na netwọk).
Cedega Ọ nwere interface siri ike siri ike nghọta (n'echiche m nke kachasị sie ike nke 3) nke nwere ọtụtụ ngwaọrụ iji soro ndịna eserese, ụda na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe. O sitere na mmanya ochie nke dịtụ ochie nke dịlarị anya na koodu Wine mbụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, e nyere Pixel Shaders na teknụzụ ndị ọzọ nnukwu nkwado na n'ọnọdụ ndị ọzọ site na ịme na ọtụtụ egwuregwu na-agba ọsọ na Wine ma ọ bụghị na Cedega. Cedega na-akwado OpenGL na Directx ma tinyekwa ụfọdụ ndakọrịta na Wine na CrossOver gbasara Directx. Otu ihe adịghị ike nke Cedega bụ nkwado ya maka .Net ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịwụnye ụlọ akwụkwọ ndị a na-eme ka egwuregwu ndị dabere na ya ghara ịgba ọsọ na Cedega.
El Weebụsaịtị Trasgaming gụnyere ogologo nchekwa data nke egwuregwu nke Cedega na-akwado, nke dị maka naanị ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ndenye aha. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọbụlagodi na BD na-ekwu na egwuregwu ahụ na-agba ọsọ ma ọ bụ na ọ bụghị; a na-enye obere ozi ndị ọzọ mgbe niile. Ozugbo ndenye aha gwụchara ngwa ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, naanị ya efunahụ nkwado nke nchekwa data yana ụfọdụ ihe ndị dịịrị naanị ndị debanyere aha.
Họrọ ikpo okwu doro anya
O di nwute na odighi onye di elu karie ndi ozo, ya mere, otu n’ime ihe ndi ozo ndi ozo gwuru m bu ihe omuma nke «ma ọ bụrụ na ị chọrọ jirichaa ego nke windows egwuregwu na gị pc iji niile 3«N’ikwu eziokwu na nkà ihe ọmụma a nwere ike ịrụ ọrụ maka ụfọdụ, mana n’oge a mụ na naanị 1 n’ime ha nọ.
N'agbanyeghị na ọ dabeere na Wine, 3 niile na-arụ ọrụ dị iche iche na nke ọ bụla nwere uru ya; dịka ọmụmaatụ: DB kacha mma bụ nke Wine, ebe nkwado kachasị mma maka ntinye ngwugwu bụ nke CrossOver na-enye, yana nkwado kachasị mma maka teknụzụ Pixel Shaders nke Cedega na-enye. Egwuregwu dị na Wine na CrossOver na-agba ọsọ site na menu ndị ọrụ mgbe Cedega na-agba ọsọ site na ngwa Cedega.
Ndakọrịta na Windows n'ime GNU / Linux gburugburu agaghị abụ nke kachasị mma, mana opekata mpe ọ dị mma ịmara na anyị nwere azịza atọ ndị a ga - enyere anyị aka iwepu okwu ndị ọzọ juputara n'uche ndị ọrụ Windows: «Linux anaghị m ahụ maka na enweghị m ike igwu ya".
Ọ bụrụ na, dị ka m, ị ka nwere iberibe ụfọdụ egwuregwu Windows ma họrọ iji Linux (na-enweghị ibu ọrụ nke iji buut abụọ) mgbe ahụ ị maara, site na ngwaọrụ ndị a ị nwere ike ime ya.
Nke a bụ mbipụta Mbipụta nke otu n'ime Blizzard franchises (World of Warcraft) nke ejiri Crossover na LXDE m.
World of Warcraft (WoW) emomi na LXDE
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Enweela m Linux ... ugbu a kedụ ka m si egwu?
Ihe 39 kwuru, hapụ nke gị
Ihe kacha mma, n'oge na-adịghị anya anyị ga-eji steam & Command 'merie na Linux.
Ya mere, mmanya na ihe ndị ọzọ agaghị adị mkpa.
mmanya ga-adị mkpa mgbe niile ... ugbu a anyị enweghịzi ike ijide ya ka ọ kpọọ ya dị iche mana mana n'ikpeazụ, anyị nwere olileanya na ha agaghị ahapụ ọrụ dị mma dị ka mmanya
Ọ bụghị mmadụ niile na-a wineụ mmanya iji egwu egwuregwu, dị ka ọ dị ka ị na-eche.
Ikwuru eziokwu, A naghị eji mmanya eme egwuregwu mgbe niile (ọ dị oge m na-eji ya iji Photoshop mana mgbe m chọpụtara banyere GIMP m kwụsịrị ime ya)
Ọzọkwa Steam na-abịa maka Linux.
Ihe Steam bụ ozi ọma.
Ihe na-ewute m bụ gịnị kpatara na ọ ga-efu ndị mmepe nnukwu ihe iji mepụta ngwa ngwa obe ha? Kedu ihe dị mma, lee ka iwe na-elo na Windows naanị n'ihi na enwere ngwa dị naanị maka ikpo okwu ahụ.
N'agbanyeghị na m nọrọla na Linux maka ọnwa 3, na ịbụ onye egwuregwu oge niile, echere m na mmanya bụ ngwa ọrụ anyị ekwesịghị iji maka ebumnuche ndị a, dị ka Rots87 si kwuo, a ga-eji mmanya maka ebumnuche ndị ọzọ, maka ndị chọrọ igwu egwu ahụ chere maka mbata nke uzuoku ma ọ bụ kpọọ egwuregwu ndị dị mma maka Linux.
ọ bụ ezie na m bụ onye ọhụụ ọ bụ m umeala n'obi criter.
PS: Anaghị m ekwu na mmanya enweghị isi, n'ụzọ ọzọ, ahụghị m isi na iji ya dị ka ngwa egwuregwu.
Ọzọkwa ka ị ghara icherechasi ike maka uzuoku enwere Desura onye ahịa maka egwuregwu dị ka uzuoku
Ezi onyinye, ekele maka ime ka anyị mara banyere ibe a.
Go na-aga ịzụta xbox ma ọ bụ ihe ya na ya ma hapụ oke egbe
Ọ bụghị anyị niile nwere ike ịzụta pc na njikwa, yabụ anyị na-achọ igwu egwu nke ọma na compus anyị.
Ọ bụghị nke ahụ. E nwere ndị na-enwe mmasị igwu egwu otu egwuregwu ọ bụ naanị maka PC-Windows.
Azịza ya bụ maka ndị mmepe ka ha kwụsị imetụ imi aka wee mepụta sọftụwia ikpo okwu ha ka anyị nwee ike ịhọrọ ebe anyị họọrọ.
O doro anya na ị maghị maka egwuregwu, ajụwo m gị, ị nwere ike igwu Dota2, Aion, Artic Combat ma ọ bụ World Wacraft n'onwe ya na xbox?
nkume na mpịakọta dijo
Abụghị m onye egwuregwu, mana afọ ole na ole gara aga, achọrọ m icheta ụbọchị m na mbido narị afọ a, mgbe enyere m egwuregwu, na m gbara ọsọ Starcraft na Age nke alaeze na Playonlinux, ngwa dabere na Wine ma lekwasị anya na usoro nke malite egwuregwu, tumadi (kamakwa maka ngwa ndị ọzọ), Windows. Amaghị m otú ya mmepe ga-adị ugbu a, ma mgbe m na-eji ya mere ka m ukwuu enyi karịa Wine.
Ugbu a, mgbe ọ dị m ka m na-egwuri egwu, ana m ana ndị Megaman ụgwọ emulator Bsnes, hehe.
Achọghị m ka m mebie aha ya.
Ma ọ dịla ogologo oge kemgbe cedega anaghịzi adị, ugbu a ha na-akpọ onwe ha gametree, egwuregwu crossover na ụlọ ọrụ crossover ụfọdụ gara aga. Ihe ederede kwesiri imelite ka oghara igba aghara
Daalụ maka okwu gị…. Amaghị m n'ezie banyere ntụziaka ndị ahụ ugbu a n'ihi na ime ihe n'eziokwu ... ejiri m Wine, Cedega na Crossover na Mahadum mana na mbata nke Winetricks na Winex (edemede iji melite ahụmịhe egwuregwu na Wine) akwụsịrị m iji ndị ahụ nyiwe.
Ejiri m Cedega na Gentoo laa azụ na 2009 wee kpọọ WoW. Ọ dị oke mma, nke na-eme ka minimap ahụ kụọ oge ụfọdụ, mana ihe niile dịkwa mma. Oh, ma manye config.wtf iji OpenGL.
Neji: dee m ozkar na cristal dot hlg dot sld dot cu.
Obi dị m ụtọ na SuperTuxKart hahahaha na tupu m gwuo sauerbraten, ọ naghị adị m ka egwuregwu hahaha
O meela ka m nwee echiche ka mma banyere otu m ga-esi nye ndị nwere mmasị n'okwu a ndụmọdụ.
Naanị m na-egwu egwu mgbe ụfọdụ mana na njikwa ... iwu na nke ahụ bụ ebe m na-enweta. Thatfọdụ ndị na-akpali GNU / Linux ibu ndị na-egwu egwuregwu nke ọzọ nke na ọ chọghị ka eserese eserese, na ndị ọzọ ndị na-egwu egwuregwu Ndụ ha niile mgbe ha rutere, ha na-enweta phobia nke na-atụ ha ụjọ karịa Mbibi.
Tinye Dosbox, na egwuregwu ndị amaala, dị ka Quake Live si firefox ma ọ bụ ọbụlagodi ọdụ ụgbọ mmiri maka Quake ma ọ bụ Mbibi ochie na usoro ndị dabere na ya bụ mbibi chocolate na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ.
N'ezie PlayonLinux nke na-eme ka nrụnye egwuregwu dị iche iche dị mfe na edemede ya.
Ma ọ bụrụ na ị nwere kọmputa dị ike, ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị nwere kaadị vidiyo Xen abụọ na VGA Passthrough na MS WOS, yabụ ị ga-enwe Linux na-enweghị VIRUSES dị ka sistemụ isi, ma mezue MS WOS na-agbaso na inomi na 95% ma ọ bụ karịa ike nke akụrụngwa, ọbụlagodi 105% ma ọ bụrụ na arụnyere na-enweghị antivirus ma e jiri ya tụnyere nwụnye na antivirus - na-agba antivirus site na Linux na nkebi WOS MS site n'oge ruo n'oge mgbe ị na-eme nchọgharị na Linux -
O di nwute, iji tinye Xen na VGA passthrough ị gha enwe kọmputa nke oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ I3 / i5 / i7 niile na-akwado ya na ndị kachasị elu site na AMD, mana ị ga-enyocha ya.
Na-eche akụkụ nke abụọ nke isiokwu ahụ na aro ndị anyị na-eme, daalụ maka ọrụ gị.
Isiokwu a dị ka rehash (nsụgharị n'efu) nke ọzọ a (ọbụlagodi m na-ahụ ọtụtụ ihe ndabara):
Echere m na ọ dị mkpa ịkpọtụrụ isi iyi ahụ.
N'ezie, ugbu a, m lere ya anya, enwere njide atọ yiri nke ahụ na abụọ (a ga-ebu ụzọ dee ya na isiokwu ahụ).
Nsogbu nke njide bụ nke m fault mgbe m wetara otu isiokwu, m na-ebu ụzọ dee ihe m chere wee gwa San Google ka o gosi m onyogho nke ihe m na-achọ n'ihi ya, ọ ga-ekwe omume na ha bụ otu njide ahụ. Otú ọ dị, isiokwu ahụ ị na-ekwu maka okwu banyere otu isiokwu ahụ ka enwekwara ike ịgụnye ya na arụmụka ahụ ... ọzọ daalụ maka okwu gị.
Azịza gị juru m anya. Ihe merenụ bụ ihe ịtụnanya. Isiokwu abụọ ahụ nwere usoro yiri nke a, ha na-eketa ihuenyo 3 ma enwere paragraf yiri nke ahụ. Lee otu ihe atụ:
Mmanya nwekwara ihe nhazi eserese a na-akpọ "winecfg" na ọ gụnyere ngwaọrụ ndị akọwapụtara maka ịhazi ndị ọkwọ ụgbọala, multimedia, wdg. Site na ndabara ngwa a anaghị eweta Frontend ọ bụla maka igbu egwuregwu ahụ, mana ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ngwa na-arụ ọrụ maka ya.
Tụlee nke a na nke a:
A na-akpọ ihe ọ configurationụ configurationụ aicalụrụma nke Wine “winecfg” (Mmanya nhazi), ọ gụnyere ngwaọrụ maka ịkọwapụta ndị ọkwọ ụgbọ ala, ịhazi mgbasa ozi, ntọala eserese, na ijikọ desktọpụ. Site na ndabara, enweghi ihu ọ bụla eserese maka ịwụnye ma ọ bụ ịgba egwu egwuregwu, mana enwere mmemme nke atọ nke nwere ike ịme dị ka ihu.
Ha abụrụla ihe ndaba dị egwu. Biko gbaghara nghọtahie ahụ.
Ndụmọdụ ikpeazụ na edemede ahụ. Gbanwee ego nke ịkwụ ụgwọ na Cedega na Egwuregwu CrossOver. Put na-etinye otu ndị na-apụta n'isiokwu nke ọzọ na ha nwere mgbe ochie ;-).
Ọ dị mma, ị maara enyi, maka nke na-esote ị ga-ekwupụta isi mmalite nke post ị dabere na ịde nke gị, yana ịkọwa isi mmalite nke ihuenyo (ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ha na PC gị).
Kama, m ga-eche na ọ gaara ekwu na ọ bụ nsụgharị wee kpọtụrụ weebụsaịtị ebe isiokwu ahụ dị.
Echeghị m na o siri ike ide edemede banyere mmanya, ọ ka mma karịa ịsụgharị na iyingomi ha dị ka nke gị
Onweghi oge m mere ntụgharị asụsụ, ma ọ bụghị na m gaara ewetara gị ntinye blog dị ka nke ahụ: ntụgharị nke isiokwu X na weebụsaịtị ebe ọ bụla m nọ, abụghị m otu n'ime ndị chọrọ inweta otuto maka ọrụ ndị ọzọ yana dịka m zara onye ọrụ ọzọ na mbụ Were E si na Google wepụta screenshots ahụ ma ọ bụrụ na ha sitere na isiokwu ahụ, ana m arịọ mgbaghara ọzọ.
… N'ime ọtụtụ mmemme dị adị nke na-enye anyị ohere i emomi egwuregwu Windows anyị.
Wine dị ka aha ya na-ekwu, ọ bụghị emulator http://en.wikipedia.org/wiki/Wine_%28software%29
Ọzọkwa, kama ịsị na Wine zuru oke, ị ga-ekwu na ọ bụ n'efu, dịka ebumnuche ndị otu mmepe kwuru "Wine ga-abụ sọftụwia n'efu."
Enwere m ajụjụ, M nwere mmanya karịa wintricks, onye nwere ike ịgwa m ụlọ akwụkwọ ọ bụla m ga-etinye na winetricks Assistant iji mee ka mmanya zuru oke maka egwuregwu? Kedu ihe na - eme bụ na mgbe m mepere ọkachamara winetricks, ọtụtụ ngalaba na - apụta ma amaghị m ihe ịwụnye? ma ọ bụ ị nwere ike ịme blọgụ banyere nke a?
Enweghị m mmasị iji Wine ma ọlị, mana achọtabeghị usoro ọ bụla ka mma karịa are for Linux, ihe m na-aghọtaghị bụ ihe kpatara anaghị eme Linux maka Linux ma ọ bụrụ na ọ bụ 100% Open Source. Amule a masighi m ma aturu ya emule.
Gaara mechara gbasaa crossover maka 32 bit? Enweghị nke ahụ, m ga-amalite!
Zitere m njikọ ahụ site na email (kzkggaara [@] desdelinux [.] Net) iji budata ya wee bulite ya na .CU
M nwere ochie version (6.0) nke crossover ma anaghị m eji ya
Anọ m, m na Kubuntu 12.04 .. m na-egwu Warcraft 3 (Dota) ụbọchị ọ bụla ma ana m egwu World of Warcraft… anyị ga-ekweta na ọrụ Wine na-arị elu…. Ọ ka kwesịrị ịkpụcha ụfọdụ ihe .. mana ọ na-edozi, obere oge gara aga m wụnye iTunes na KDE m, ọ gaghị emepe 100% mana opekata mpe ọ bụ ihe. Ọzọ ihe m nwere maka nri ụtụtụ ụbọchị ndị ọzọ na Wine nwere ruo regedit nwere windo, m na: 0 mgbe m na-agụ ya hehe.
Ekele m onye ọ bụla si Monterrey, NL Mexico,
Anọ m na-eso blog a ogologo oge (na-enweghị ịdenye aha) ma ugbu a, achọrọ m enyemaka gị; Anwaala m ọtụtụ distros dị ugbu a na ọnọdụ ndụ (ubuntu 12, LMDE, Sabayon 9, Fedora, mageia 2 anaghị ebido) mana onweghi onye na-enye m ndakọrịta zuru oke na eserese m ma ọ bụ karịa nke ọ bụla na-enye m 3D zuru ezu ma ọ bụ 2D osooso, eserese m bụ otu Ati Ati Xpress 200m 128mb nke vidio a kesara na laptọọpụ ochie Compaq Presario V2615LA (V2000) mana m hụrụ ya n'anya XD, enwere m Ubuntu 12.04 ugbu a mana glxgears na-ebulite m naanị 427 okirikiri na 5.0 sekọnd = 85.242 FPS nke 50fps nke ọ welitere maka mgbanwe ụfọdụ. nke ahụ bụ gogleando, ebe fedora na lmde naanị 50 fps na sabayon 120 fps mana ọ dịghị enye m ezigbo osooso ma ọ bụ maka egwuregwu dị mfe dịka onye m hụrụ n'anya super tux 2, ama m na amd-na kwụsịrị ịkwado eserese a na ndị njikwa ọhụrụ ya. Ma dị ka ị pụrụ ịhụ, M na-achọsi ike na m na-achọghị ka winbugs ọzọ.
A na m ewere onwe m dị ka onye novice na GNU / Linux, amaara m nke a na 90 si na okpu na-acha uhie uhie mana ahapụghị m ya n'ihi na amataghị m ụda ahụ wee laghachi azụ iji merie 98se XD
Ugbu a na Ubuntu enwere m onye ọkwọ ụgbọala Gallium 0.4 na llvmpipe (LLVM 0x300).
Ekele dịrị m n'ihu ma ọ bụrụ na ị nwere ike inye m enyemaka na otu puku mgbaghara ma ọ bụrụ na m ekwesịghị itinye okwu a ebe a.
Zaghachi Frikilui (Luis)
Ndo, distro ọ bụla ị na-akwado ma ọ bụ nhazi ọ bụla m ga-etinye, echeghị m n'iji ọnụ na m ga-aga goglie ọtụtụ XD ma ọ bụrụ na mmadụ ajụọ XD.
OK ,,, Anọ m na LMDE XDD
Kedu ka WoW si arụ ọrụ na Linux taa?
Anaghị m egwu egwuregwu, mana enwere enyi na-eme ya ga-achọ ịgbanwee na Linux na Play, na-enweghị windo windo 2.
You chọrọ ọtụtụ ihe achọrọ?
reNIX: isiokwu GTK3 ohuru nwere ụdị gam akporo